Wararka Maanta: Jimco, Sept 25, 2020-Guddoomiye Mursal iyo Axmed Madoobe oo Muqdisho ku kulmay
Madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe ayaa waxa uu maalmahaan magaalada Muqdisho ka wadaa kulamo siyaasadeed oo ku aaddan xaaladda dalka Soomaaliya, tan iyo wixii ka dembeeyay heshiiskii ay kala saxiixdeen maamul Goboleedyada iyo dowladda dhexe.
Warar la helayo ayaa waxay sheegayaan in mas’uuliyiintaan ay isku soo qaadeen wax-yaabo badan, sida xaaladda kala guurka ah iyo kaalinta ay ka qaadan karaan geeddi socodka siyaasadeed.
Lama ogo , labadaan hoggaamiye waxyaabaha ay sida gaarka ah iskula meel dhigeen.
Guddoomiyaha Baarlamanka oo gurigiisa lagu kulmay ayaa uga mahad-celiyay Axmed Madoobe inuu ka aqbalo kulankaan, kuna soo booqdo hoygiisa.
Magaalada Muqdisho waxaa maalmahaan ka dhacayay kulamo siyaasadeed oo adag, waxa dalka uu hadda galay marxalad kala guur ah, taas oo cid walba ku dooneyso iney sameysato isbaheysi siyaasadeed oo adag.
9/25/2020 7:23 AM EST